Kuongorora Nzizi dzeMagariro neDataSift | Martech Zone
Kuongorora Nzizi dzeMagariro neDataSift
Chitatu, November 16, 2011 Chipiri, Gunyana 25, 2012 Douglas Karr
DataSift ine simba chaiyo-nguva yemagariro midhiya data-kusefa chikuva uye ndeimwe yemakambani maviri chete pasi ane rezinesi rekugadzira Twitter data inotengeswa zviripo zvisiri zvekuratidzira, ichibvumira vashandisi kutsvaga zvinyorwa vachishandisa metadata iri muma tweets. Uye zvinoita saizvozvo neinoshamisa inoshamisa interface pamwe ne yekuvandudza koni uye yakasimba API (makiraibhurari evatengi aripo) nemutauro wayo unobvunza.
kudyidzana.content HERE "HTC, Nokia, RIM, Apple, Samsung, Sony"
DataSift yakavambwa na Nick Halstead kubatsira masangano kunatsiridza kunzwisisa kwavo uye kushandisa kweSocial Media. DataSift yakanangana nekuburitsa mamiriro ehunyanzvi data-kusefa tekinoroji uye kutyaira hunyanzvi muBig Data. DataSift yakatanga hupenyu hwayo sedhorobha kubva TweetMeme, iyo inonyanya kufarirwa Twitter nhau feed sevhisi. Mushure mekupupurira kukurumidza kwaiitwa neSocial Media masangano, Nick Halstead akatanga kugadzira chikuva chekubatsira makambani kubata Social Media uye kuwedzera pamanzwisisiro anowanikwa mukati me data.
DataSift haigumise tsvagiridzo yakanangana nemazwi akakosha uye inobvumidza makambani ehukuru hwese kutsanangura mafirita akaomesesa, kusanganisira nzvimbo, murume kana mukadzi, manzwiro, mutauro, uye kunyange pesvedzero inoenderana nechikwata cheKlout, kuti ipe nekukurumidza uye kwakanyanya kujekesa uye kuongorora. Tekinoroji yeDataSift inogona zvakare kuisa iyo yekutsvagisa dhata kune chero zvemukati zvinomiririrwa sechibatanidzo mukati meiyo posvo pachayo, ichipa makambani ane yakajeka, yakazara mufananidzo.
Zvemagariro midhiya zvakawedzera iyo yatomhanyisa-kufamba mamiriro ebhizinesi nhasi. Makambani haana hunyanzvi hwekusefa nemazana emamirioni enzizi dze data zuva rega rega, kungofungidzira chechipiri chiito chakakodzera. Izvo zvavanoda ndiko kusarudzika kuwana kweicho chaicho-nguva njere iyo ine chekuita kune bhizinesi ravo - ichivabvumidza kuti zvive nyore uye nekukurumidza kuona uye kupindura kuzviitiko zvakakura zvinoitika, hunhu hwemagariro, zvido zvevatengi - uye pakupedzisira, kudzivirira chero matambudziko ari kuuya. Isu takakatyamadzwa nechishuwo cheplatform yedu muUS uye tiri kuvhura hofisi kuti tiwane izvi zvinodiwa. Muvambi, Nick Halstead.
Izvo zvinogona kunyorera DataSift zvine muganho, zvinosanganisira mukushambadzira, kushambadzira uye kushandira vatengi, pakati pevamwe vazhinji. DataSift inoratidzira yegore-based pricing modhi ine mubhadharo-se-iwe-kuenda kana sarudzo dzekunyorera, inokodzera makambani kana vanhu ve chero saizi.
Tags: datasiftsocial media ongororonzanga kurukova
Kuvhara Pasi Facebook